झापामा कोरोनाले दुई महिने शिशु ल'ग्यो ! - Rising Dainik
October 7, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on झापामा कोरोनाले दुई महिने शिशु ल’ग्यो !
काठमाण्डौं । कोरोनाले एक शिशु लगेको छ । मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा कोरोना पुष्टि भएका कारण एक जना शिशुको ज्या’न गएको हो । भद्रपुर–८ का दुई महिने शिशुमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको थियो । आफन्तले अस्पतालबाट शिशुको श’व बुझेर घर लगेको तीन घण्टापछि कोरोनाको रिपोर्ट आएको थियो । शिशुमा निमोनियासँगै श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । शिशुमा कोरोनाको लक्षण देखा परेपछि दिउँसो १२ बजे स्वाब संकलन गरिएको थियो । स्वाब लिएको ६ घण्टाभित्रै शिशुको उपचारको क्रममा नि’धन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
ओली- प्रचण्डबि’रुद्ध क’ठोर कदम चाल्दै पौडेल, हंगामा हुने संकेत !
जनताको रगतमा उभिएर शासन गर्न रुचि छैन ; म राजिनामा दिँदैछु-राष्ट्रपति
October 15, 2020 Ramash Kunwar
२८ माघमा काठमाडौंमा हुने बृहत् जनप्रदर्शनमा सक्रिय समर्थन र सहभागिताका लागि पनि श्रेष्ठले अपिल गरेका छन्
संसद वि’घटन फिर्ता हुने देखिएपछि ड’गमगायो ओली ग्यांग, थाल्यो यस्तो तयारी !